Xanta Suuqa Kala iibsiga Ciyaartoyda ee Maanta | Somaliland Mirror
Home WARARKA Xanta Suuqa Kala iibsiga Ciyaartoyda ee Maanta
Manchester United ayaa laga yaabaa inay ka afduubato Chelsea laacibka da’da yar ee kooxda Bayer Leverkusen ee Kai Havertz.
Sida laga soo xigtay The Mirror, Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka fiirsanaya inuu u weecdo Havertz ka dib markii United ku guul darraysatay saxiixa xiddiga kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho.
Solskjaer ayaa raba inuu xoojiyo kooxdiisa da ‘yartaa, isagoo sidoo kale rajaynaya inuu Old Trafford keeno ciyaartoyda Kingsley Coman iyo Ousmane Dembele.
-Dhanka kale, mustaqbalka xiddiga khadka dhexe ee kooxda Bayern Munich Thiago Alcantara ayaan wali la hubin, iyadoo Sky Sports ay soo warinayso in xiddiga lala xidhiidhinayo Liverpool uu jeclaan lahaa inuuka hoos ciyaaro Jurgen Klopp.
Isla warbixinta ayaa sheegtay in kooxda heysata Premier League aysan hayn wax qorshe ah oo ay ku xoojinayso qadkeeda dhexe laakiin loo maleynayo in xiddiga reer Spain oo 29 jir ah lagu iibin doono £30million.
– Weeraryahankii hore ee Reds Daniel Sturridge ayaa sidoo kale warbixino laga qorayaa.
Sturrdige ayaa u sheegay Sky Sports horaantii isbuucaan inuu jecel yahay ku laabashada Premier League, xilli 30 jirkan lala xidhiidhinayo kooxaha West Ham iyo Aston Villa.
Sturridge ayaa ahaa ciyaaryahan xor ah tan iyo markii kooxda Trabzonspor ay joojiyey qandaraaskii ay kula jirtay bishii March ka dib markii uu jabiyay xeerar kooxda uga yaalay dhinaca khamaarka.
– Kooxda Arsenal ayaa doonaysa inay xoojiso safka hore ee weerarkooda.
Daily Star ayaa soo jeedineysa in Alexandre Lacazette laga yaabo inuu ka tago Emirates oo uu ku biiro kooxda heysata horyaalka Serie A ee Juventus, iyadoo weeraryahanka reer Brazil Douglas Costa uu isna dhinaca Arsenal u soo dhaqaaqayo.
– Wargeyska Daily Mail ayaa qoray in ciyaaryahanka baasha weerarka uga ciyaara kooxda Burnley Dwight McNeil uu diirada u saaran yahay Juventus oo uu qabsaday tababare cusub Andrea Pirlo.
Waxaa loo maleynayaa inay Clarets ay ka warwareegi doonto inay iska iibiso McNeil, madaama 3 sanno uu ka hadhsan tahay qandaraaska uu ku joogo Turf Moor.
Sidoo kale kooxaha AC Milan, Leicester iyo Wolves ayaa xiiseynaya daafacan, iyagoo usbuucyada soo socda la filayo inay dalab ka soo gudbiyaan.
– Dhanka Newcastle, Steve Bruce ayaa raadinaya inuu da’yarka Tottenham ee Ryan Sessegnon siiyo wadadii uu uga soo dhaqaaqi lahaa London.
The Sun ayaa sheegaysa in tababaraha Magpies uu ka dhigayo bartilmaameedkiisa kowaad ee suuqa kala iibsashada 20 jirkan ka ciyaara daafac dambeedka dhexe – kaasoo Spurs kaga soo biiray kooxda Fulham xagaagii lasoo dhaafay £25m.
Previous PostDawlada Maraykanka Oo Diiday In Wax Muddo Kororsi Ah Loo Sameeyo Madaxweyne Farmaajo. Next PostXiisadda u dhaxeysa Turkiga iyo Giriiga oo cirka isku shareertay